यूकेमा हजारौँ मानिसहरू अस्पतालबाटै सङ्क्रमित भएका निष्कर्ष - १० भाद्र २०७७, NepalTimes
यूकेमा हजारौँ मानिसहरू अस्पतालबाटै सङ्क्रमित भएका निष्कर्ष
१० भाद्र, एजेन्सी ।
किङ्स कलेज लण्डनले यूकेका १० अस्पताल अनि इटलीको एक अस्पतालमा गरेको अध्ययनमा त्यहाँ उपचाररत प्रत्येक आठमध्ये एक बिरामीमा अस्पतालमै सङ्क्रमण भएको पाइएको छ।
अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन् यो अनुपात तुलनात्मक रूपमा कम नै हो र यसले अस्पतालहरूमा प्रभावकारी सङ्क्रमण नियन्त्रणका उपाय अपनाइएको देखिन्छ।
उनीहरूले एप्रिल २८ सम्म १,५०० सङ्क्रमितहरूको आँकडा केलाएका थिए। त्यतिखेर यूकेमा सङ्क्रमण उच्च तहमा पुगेको थियो। मुख्य अनुसन्धानकर्ता डा. बेन कार्टर भन्छन्ः यी अधिकांश बिरामी पहिले देखिनै अस्पतालमा थिए। उनीहरू वृद्धवृद्धा थिए, कमजोर थिए र अन्य रोग लागेकाहरू थिए।
तर उनीहरूको उपचार पनि अरूको तुलनामा बढ्ता सफल रह्यो। शायद उनीहरूको रोग पहिचान र उपचार चाँडै हुन सक्यो।
कसरी गरियो अनुशन्धान ?
अस्पतालमा भर्ना भएको १५ दिन वा त्योभन्दा धेरै दिनपश्चात् सङ्क्रमित भएकाहरूलाई मात्र अस्पतालबाट सङ्क्रमित भएको मानिएको छ।
यदि अस्पतालमा भर्ना भएको ५ देखि १४ दिनको अवधिमा सङ्क्रमित भएकालाई पनि स्वीकार्ने हो भने यो अनुपात २३ प्रतिशतमा उक्लन्छ। तर भाइरसको सङ्क्रमणपश्चात् शरीरमा भाइरस सक्रिय हुने वा लक्षण देखापर्ने अवधि लामो हुने भएकाले अस्पतालबाटै सङ्क्रमित भनेर यकिन गर्न असम्भव हुन्छ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका सघन उपचारसम्बन्धी विज्ञ प्राध्यापक डन्कन यङ् भन्छन् यस्तो अध्ययनले छोटो समयको अस्पताल बसाइमा सङ्क्रमित भएकाहरू समेट्न नसकेको हुन सक्छ। साथै यो अध्ययनले ती बिरामीमात्र समेट्न सक्यो जो थला परेर अस्पतालमा उपचार लिन बाध्य भए।
जबकि अधिकांश त्यस्ता मानिस जो अस्पतालमा सङ्क्रमित भए तर जसलाई कुनै उल्लेखनीय असर देखिएन र घरमै विनाउपचार निको भए। जे होस् यो अध्ययनले अस्पतालबाट सङ्क्रमण फैलिने जोखिम तुलनात्मक कम नै रहेको देखाएको छ।(बीबीसी)